China LEDD500 / 700 N'uko Ikanam Ugboro abụọ Head Hospital Medical Light na OA Asambodo emepụta na suppliers | Wanyu
LEDD500 / 700 N'uko Ikanam Ugboro abụọ Head Hospital Medical Light na OA Asambodo
LEDD500 / 700 na-ezo aka okpukpu abụọ ọkụ ọkụ ụlọ ọgwụ.
A na-eji alloy alloy mee ụlọ ụlọ ọgwụ ahụike ụlọ ọgwụ nwere nnukwu efere aluminom n'ime, nke na-enye aka maka ikpo ọkụ ọkụ. Bulb bụ bọlbụ OSRAM, odo na ọcha. Igwe ihuenyo LCD nwere ike ịhazigharị ọkụ, ogo agba na CRI, ha niile nwere ike idozi na ọkwa iri. Ogwe aka na-agbagharị na-agbaso ogwe aka aluminom dị arọ maka nhazi ziri ezi. Enwere nhọrọ atọ maka ogwe aka oge opupu ihe ubi, nke kwesịrị maka ime ụlọ na-emefu ego dị iche iche. I nwekwara ike kwalite mgbidi mgbidi, ndabere batrị usoro, wuru na-igwefoto na ileba anya.
■ ịwa ahụ afọ / izugbe
Surgery ịwa ahụ obi / vaskụla / thoracic
Um traumatology / mberede OR
1. Ìhè miri emi
Medicallọ ọgwụ na-ahụ maka ahụike nwere mbibi ọkụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% na ala nke ogwugwo, yabụ achọrọ nnukwu ọkụ iji hụ na ọkụ dị ọkụ. Igwe ọkụ ụlọ ọgwụ dome abụọ a nwere ike inye ọkụ 160,000 na omimi omimi nke 1400mm.
2. Magburu onwe Onyunyo Free Performance
Ọ dị iche na ndị nrụpụta ndị ọzọ na-azụ anya m dị mfe, anyị na-etinye ego nke ukwuu iji zụlite anya m pụrụ iche na arụmọrụ kachasị mma. Ikewapụ oriọna LED iche na oghere nke ya, mepụta mpaghara ọkụ ya. Nchikota nke ihe nkpuchi di iche iche na-eme ka ebe oku di nma ma nwekwaa oke onu.
3. Onye ọrụ-enyi na enyi LCD Touchscreen Control Panel
A na-agbanwe ọnọdụ okpomọkụ, ọkụ ọkụ na ntụgharị ntụgharị agba nke ọkụ ụlọ ọgwụ na-arụkọ ọrụ ọnụ site na njikwa LCD.
4. Movementgagharị agagharị
Njikọ ọnụ ọnụ ụwa 360 na-enye isi ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ ahụ ike ka ọ na-agagharị na gburugburu ya, ma na-enye nnwere onwe dị ukwuu nke ịgagharị na nhọrọ nkwụsịghị nke ọma na ime ụlọ dị ala.
5. Ama knownma chingmafe Mgbanwe Ike
E nwere ụdị abụọ nke ikike ịgbanwee ike anyị, belụsọ maka ndị oge niile, arụ ọrụ kwenyesiri ike na oke AC110V-250V. Maka ebe voltage na-ejighị n'aka, anyị na-enye ike ọkụ ọkụ na-agbanwe ike na ike mgbochi nnyonye anya siri ike.
6. Kwadebe Maka Ojiji Ọdịnihu
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwalite n’igwe ọkụ n’ọdịniihu, ị nwere ike ime ka anyị mara tupu oge eruo, anyị ga-eme nkwadebe maka itinye na mbu. N'ọdịnihu, naanị ị chọrọ aka na igwefoto dị na ya.
7. Nhọrọ Ngwa Ngwa Nhọrọ
Ọ nwere ike na-onwem na-ewu na-igwefoto na ileba anya, mgbidi ugwu akara obubọk, ime akara na batrị ndabere usoro.
Nke gara aga: LEDD620620 Ceiling LED Dual Dome Medical Operating Light with Wall Control
Osote: DL500 Halogen Oriọna Mwepụ Na-ewepu na Wheels
LEDD620620 N'uko ikanam Dual Dome Medical Opera ...
LEDL500 Hot Sale ikanam rechargeable Mobile Operat ...
LEDB730 Wall arịọnụ Ikanam OT oriọna na Articula ...
LEDB200 ikanam Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya Type Medical Examinati ...
LEDD500 N'uko-nọkwasịrị n'ịnyịnya na ikanam Single Dome Operati ...
LEDB260 Ikanam Operating Nnyocha Oriọna Wall Typ ...